I-Dolphin Sands Beach Studio - I-Airbnb
I-Dolphin Sands Beach Studio
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Guy
U-Guy Ungumbungazi ovelele
Ucezu olukhethekile logu olusempumalanga olumangalisayo lwase-Tasmania, i- 'Dunes' studio yindawo yokuphumula yabantu abashadile abazophumula futhi bavuseleleke. Phakathi kwezitshalo zendabuko zalesi sivimbe sama-acre angu-5, le sethingi ethulile ingena ngqo ebhishi elibukekayo elingamakhilomitha angu-9 kanye nama-vistas okudonsa umoya e-Freycinet National Park. Vuka uye kuzinyoni kanye nokuphakama kwelanga okunesihlabathi. Hamba, bhukuda, phumula futhi. Jabulela ukushona kwelanga okumangazayo nesibhakabhaka esikhulu sasebusuku ngaphambi kokulala emisindo yamagagasi, uvule konke futhi.
Istudiyo se- 'Dunes' siyindawo yokuhlala yesibili eseceleni kwendlu eyinhloko (abanikazi bahlala e-Hobart).
Kukhona i-TV enokwamukelwa okuhle ne-inthanethi engenantambo ehleliwe.
I-studio sihlinzekwa ngamanzi avela emanzini endawo. Amanzi emvula ahlungiwe ngesanti futhi nakuba 'kunzima' kancane kuphephile - kodwa situsa ukuphuza imvula noma amanzi asebhodleleni. Siye sahlolwa amanzi njalo (ngo-February 2021) futhi ahlangabezana nezindinganiso zokuphepha kwezempilo.
Sinikeza amanzi asebhodleleni futhi kukhona ijusi yokuhlunga engagcwala ethangi lamanzi emvula eduze ne-studio.
Kukhona i-toaster, iketela, i-microwave, i-Weber gas barbecue kanye nepuleti likagesi elishisayo (amapuleti amabili) okupheka.
Izinja zamukelekile nabanikazi abafanele, kodwa phawula ukuthi indawo ayinankinga. Izinja zingalala ngaphakathi kodwa sicela ukuthi zingagcwali ifenisha. Indlwana/umbhede omncane uyatholakala uma kucelwa abantu abashadile abanezingane ezincane kakhulu.
Uma unamakhono, ama-kayak amabili ayisisekelo ayatholakala eduze nebhishi.
5km ukusuka emgwaqweni ungathola ama-oyster amnandi kakhulu endawo kusuka ku-Mels Oyster Shack.
Singamakhilomitha angaba ngu-8 ukusuka e-Swansea. Kuyinto yokungcebeleka yemizuzu engu-45 yokushayela ukuya e-Coles Bay/Freycinet National Park, enezivini eziningi ezinhle ongazivalela endleleni. Cishe ibanga elifanayo eningizimu ukuya e-Triabunna kanye nesikebhe sase-Maria Island.
Nakuba sivakashela njalo indlu ukuze sihlale endlini enkulu, sizohlonipha ubumfihlo bakho. Uma singekho, siyatholakala ngemiyalezo ku-Airbnb. Indlela elula yokwenza lokhu yi-app ye-Airbnb esitusa ukuthi izivakashi zidawunilode ngaphambi kokuvakasha kwazo. Sinabantu bendawo abanganikeza usizo olusheshayo uma kudingeka.
Nakuba sivakashela njalo indlu ukuze sihlale endlini enkulu, sizohlonipha ubumfihlo bakho. Uma singekho, siyatholakala ngemiyalezo ku-Airbnb. Indlela elula yokwenza lokhu yi-app ye…
Inombolo yepholisi: DA 2020 / 103